Samachar Batika || News from Nepal » किन मन पराउछन् पूरुषले यस्ता युवती ?
किन मन पराउछन् पूरुषले यस्ता युवती ?
सामान्यतया स्लि’म केटीहरु आ’र्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर अहिले एक अनुसन्धानले यो कुरालाई ग लत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन भन्नुको अर्थ सजिलैं छा डेर जाँदैनन् ।
नेशनल अटोनान्मस यूनिवर्सिटी अफ मेक्सिकोंले गरेको अध्यनमा स्लि’म केटीहरुको दाँ’जोमा मोटी केटीहरुसँग स’म्बन्धमा रहेका पुरुषहरु धेरै खुःशी हुन्छन् । अध्यनमा भनिएको छ कि स्लि’म केटीहरुको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा धेरै खुःशी रहन सक्छ ।
यस्ता महिलाहरु पुरुषलाई सि’क्स प्या क लगायतका शाररीक रुपमा त’नाब हुने खालका कामहरु गर्न द’बाब दिदैंनन तर स्लि म केटीहरु यस्ता कुराहरुमा द बाब दिन्छन् । अर्को कुरा जो महिला मोटी छिन उनलाई मिठो खाना पकाउन आउँने झण्डै ९९ प्रतिशत सम्भावना हुन्छ । यसरी खानेकुरामा पनि उनले श्रीमानको मन जि’त्न सक्छिन । अन्य कामहरुमा केही अ’ल्छी गर्ने भए पनि खानेकुरामा मोटा मानिसहरु अ’ल्छी गर्न सक्दैनन् ।
अध्ययन यो पनि भन्छ मोटी महिलासँग स’म्बन्धमा भएको केटा मा’नसिक रुपमा कहिल्लै त’नाव नलिने प्रकृतिको हुन्छ । यर्सथ मोटी महिलाहरु श्रृंगार देखि लिएर अन्य विविध कुराहरुमा केटालाई दुःख दिने स्व’भावका हुँदैनन् । एउटा सत्य के हो भने जो मानिस मा’नसिक रुपमा ठिक हुँदैन उ नै धेरै दुब्लो पातलो हुन्छ ।
अध्ययन यो पनि भन्छ मोटी महिलासँग स’म्बन्धमा भएको केटा मा’नसिक रुपमा कहिल्लै त’नाव नलिने प्रकृतिको हुन्छ ।
मोटी महिलाहरु कुनै पनि कुरा मनमा राखेर ष’डयन्त्र गर्ने खालका हुँदैनन । उनीहरु मनमा भएको कुरालाई तत्काल भन्छन तर पछि सम्म राखेर ब’दला लिने स्वभावका हुँदैनन् । यसरी दाम्पत्य जीवन खुःशी र सफल हुन्छ उनिहरुले सन्तानलाई पनि यसरी नैं प्रेम गर्छन अनी परिवारलाई पनि ।
यहाँ गरिएका कुराहरुमा हामीले केही परिमार्जन गरेका हौं तर दावा गरेका होईनौं । यो नितान्त अध्यनले देखाएको कुरा हो त्यसैले तपाईको प्रेम स’म्बन्ध राम्रो बनाउन्को लागि एक अर्कालाई बुझ्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस् । यति भएको खण्डमा झण्डै सबै स’म्बन्धहरु दिगो र टि’काउ हुन्छन् । समय पोस्ट बाट साभार ।
प्रकाशित मिति ४ चैत्र २०७६, मंगलवार १५:३१